अभिभावकीय भूमिकामा बस्न गापा अध्यक्षलाई अर्जुन बमको आग्रह – Karnalisandesh
अभिभावकीय भूमिकामा बस्न गापा अध्यक्षलाई अर्जुन बमको आग्रह
प्रकाशित मितिः ३१ बैशाख २०७७, बुधबार १४:१५ May 13, 2020
कालिकोट। जिल्लाको पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमलाई नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अर्जुन बमले अभिभावकीय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्।
केही दिनयता पालिका तनावपूर्ण बनेपछि हाल अमेरिकाको बाल्टिमोरमा बस्दै आएका अर्जुन बमले अध्यक्ष बमलाई गापाको अभिभावकीय भूमिका रहेर आन्तरिक विवादलाई समाधान गर्न सुझाव दिएका छन्।
गत शनिबार गापा अध्यक्ष र (नेकपा) पलाँता कमिटी अध्यक्षबीच भएको विवादले राम्रो सन्देश नदिएको भन्दै केस बमले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। गापा अध्यक्षका हैसियतले आफ्नो पालिकाभित्रको सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारीलाई बहन गर्नुपर्ने नेता बमको भनाई छ।
कर्णाली सन्देशसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले पलाँताको विवादका बारेमा आफू चिन्तित रहेको समेत बताए। उनले भने, ‘संविधान स्थापनासँग स्थानीय निकायको देशभरी चुनाव भयो। त्यस्तै पलाँतामा पनि दुई तिहाईभन्दा बढी ठाउमा पलाँताका जनताले कम्युनिस्ट पाटीलाई जिताए। धेरैको आशा पनि जगाउनु भयो। धेरैलाई माथि पठायौं। धेरैलाई धेरै पटक भोट पनि दियौं। तर, जनताको अभिमत एकतिर पलाँताको सत्ताधारी नेकपा अर्को तिर। यतिका वर्षसम्म नजिकका पत्रकार मार्फत सस्तो लोकप्रियताका लागि समाचारलाई मात्रै ध्यान दिने कामहरु भए। गापामा आन्तरिक विवाद झिकेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम भएको देखिन्छ।’
उनले अगाडि भने, ‘पलाँतालाई समाचारको माध्यम बनाइयो। आफ्नालाई संस्था दर्ता गर्न पठाइयो। कसैलाई सहकारी खोल्न पठाइयो। गापा अध्यक्ष नीजि शिक्षा र यातायतको विरोध गर्ने तर, आफैले नीजि हस्पिटल खोल्न तिर लाग्नु भयो। अलि पहिलेसम्म सत्ताको आडमा सबै मिलेरै धन्दापानी चलेकै थियो। जनता पनि चुप बसकै थिए। तर, पछिल्लो समयमा आन्तरिक विवाद सडकमा आफै पोखिएको छ। यसमा सम्बन्धीत सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। कानून, नियम, व्यवस्थाका आधारमा चल्नुपर्छ। उत्पन्न विवाद समाधान गरेर गापाको विकासमा एकजुट भएर लाग्नुपर्छ।’
नेता बमले विश्व मावन जगत यतिबेला कोरोनाबाट त्राहिमाम बनेको बेलामा कोरोनाबाट कसरी बाच्ने र बचाउने भन्दा पनि अन्तै ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, ‘कोरोको महामारी तर्फ ध्यान नदिएर महामारीका बेला पनि मालामाल बन्न खोज्ने ? अनियमितता गर्ने, नीतिगत तथा मिलजुली भ्रष्टचार जस्तो आर्थिक अनुसाशनहिन काम गर्ने? विकासका नाममा बार्गेनिङ गर्ने ? तपाईंहरुलाई पलाँतीजनता र प्रतिपक्ष कांग्रेसले कति सहयोग गरेको रहेछ ? एक छिन सम्झनुहोस्। अन्त्यमा, फेरी पनि भन्छु, गापा अध्यक्षको बाँकी कार्याकाल सफल बनाउन र गापाको विकास, स्थायित्व, स्थिरता र सहभागिताका लागि जिम्मेवार बन्नैपर्छ। बदला लिने र एक आपसमा लडाउने भिडाउने काम हुनु राम्रो होईन।’
त्यस्तै गत शनिबार गापा अध्यक्ष बम र उनकी पत्नी गोरिकला बममाथि आक्रमण गर्ने नेपाल कम्यूनिष्ट पाटी (नेकपा) पलाता गाउँपालिकाका कमिटीका अध्यक्ष इन्द्र रोकाया र सोही गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर भण्डारीलाई नेकपाले पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ।
सडक निर्माणको विषयमा छलफल गने क्रममा विवाद हुँदा गापा अध्यक्ष र उनकी पत्नी गोरिकलामाथि ढुङ्गा प्रहार गरी घाइते बनाएको भन्दै गाउँपालिका कमिटीक अध्यक्ष रोकाय र वडा अध्यक्ष भण्डारीका विरुद्ध जाहेर परेपछि नेकपा कालीकोटले दुवै जनालाई निलम्बन गरेको हो।
नेकपा कालिकोटले घटनाको छानविन प्रतिवेदन नआउँदासम्म दुई नेतालाई निलम्बन गरेको जनाएको छ। पचाल झरना गाउँपालिका अध्यक्ष खडकराज सेजुवालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ।